Mpirotsaka An-tsitrapo Avy Any Amin’ireo Tanàna Nidonan’ny Rivomahery Tao Filipina Mizara Tantara Efatra Mety Hampirotsa-dranomaso Anao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Desambra 2013 14:12 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, Español, Deutsch, Català, русский, 日本語, English
Arabe iray feno poti-dravatra ao Tacloban. Sary avy any Tudla
Efa ho iray volana izay no lasa taorian'ny namelezan'ilay rivotra faran'izay mahery, Haiyan (Yolanda), ny faritra afovoan'i Filipina. Tanàna maro no simba tanteraka noho ilay onja mahery izay namono olona maherin'ny 5 alina sy namela tsy manan-kialofana an-tapitrisany.
Tany amboalohany ireo sisam-paty tamin'ilay rivomahery dia nitaraina momba ny fihisatry ny fahatongavan'ny sakafo, rano, fanafody sy ireo fanampiana hafa nilaina maika. Tsy azo naleha ireo tanàna lavitra noho ny haratsian'ny làlana ary olana hafa momba ny fandaminan-draharaha. Ho famaliana ny kiana, nanome toky ny vahoaka ny governemantam-pirenena fa hanao izay rehetra azo atao mba hanitàrana ny fanampiana ho any amin'ireo rehetra niharam-boina.
Ny faharavàna nameno ny faritra rehetra naterak'i Haiyan no nanentana ezaka iray fanampiana sy fanarenana avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tao Filipina, an'arivony maro ireo mpirotsaka an-tsitrapo tany amin'ireo foibe momba ny vonjy aina sy famonosana fanampiana. Marobe ihany koa ireo nandeha nankany amin'ireo faritra niharan'ilay rivomahery ka nanangona ny halalin'ny faharavàna navelan'i Haiyan sady manolotra ihany koa ny fanampiana tena ilain'ireo mpialokaloka.
Ireny mpirotsaka an-tsitrapo ireny no afaka nizara saripika, lahatsary ary tantaran'izay natrehany maso tany Samar sy Leyte. Ny rakitra avy amin-dry zareo no nanamarina ireo tatitra tany ampiandohana mikasika ny dona nahafaty naterak'i Haiyan sy ny fihisatry ny hetsik'ireo biraon'ny governemanta.
Nosoritsoritan'i Michael Beltran ny zava-misy teny amin'ny faritra ivelan'ny seranam-piaramanidina tao Tacloban. Tacloban no renivohitr'i Leyte ary ‘teboka aotra/ivo’ ho an'ny zava-doza nentin'ilay rivomahery :
Ny sary voalohany tamin'ny herinandronay tao Leyte dia ny seranam-piaramanidina misy olona mangovitra sy noana etsy ankilany, tsy jeren'ireo miaramila sy ny US Navy, ary baoritra maro feno sakafo etsy andaniny. Ankoatra ireo fotodrafitrasa hita maso sy zara raha mijoro, ny tena nanaitra ahy indrindra dia ny hazo sy ny bozaka. Tsy misy loko/endrika intsony, mbola mijoro, maina, tsy misy fotaka, fa dia zavamaniry maty fotsiny hatrany am-paratazana; hazo izay tratry ny tsy an-kihetsika sy mitodika mifanohitra amin'ny zotra nalehan'ny rivotra nentin'ilay rivomahery ny rantsany sy ny raviny. Lasa sary miraikitra ao an-tsainao ilay sary alohan'ny ahatsapan'ny sainao ny fofona manaikitra
Renato Reyes, mpikatroka mafàna fo, dia namelively ny filonan'ny fandraofana ireo vàtana mangatsiaka tao an-tanàna :
Taorian'ireo sarinà kitapo famonosana faty tao amin'ny tsenam-pokonolona tao Tacloban, niato tsy naka sary intsony aho. Tsy maintsy notakariko ny zava-misy marina, hoe, tapa-bolana aty aorian'ny fandalovan'ilay Rivomahery Haiyan, mbola misy razana angonina ihany, mbola nonina teny akaikin'ireo razana efa mihasimba ny olona, ary nisy ezaka nataon'ny governemanta mba hanakelezany ny isan'ireo niharam-boina sy handrakondrakofana ny tsy fahaiza-manaon'ireo manampahefana amin'ny fiatrehana loza voajanahary.
Mitombo ao Samar sy Leyte ny tranolay sy ny labozia, hoy ny nosoratan'i Leon Dulce, mpiahy ny tontolo iainana :
Izahay manokana dia vavolombelona nahita maso ireo tanànan'ny tranolay sy labozia mijoro eny anivon'ireo poti-javatra, anaty orana tsy mitsahatra mirotsaka. Very làkana fanjonoana sy fitaovana hafa daholo ireo olona mpanjono rehetra, raha tsy misy azon'ireo mpamboly atao kosa afa-tsy ny mibanjina ireo voanio aminà hektara maro niongotra hatramin'ny fàkany sy nameno ny tanimbary
Betsaka tamin'ireo sisam-paty no niandry andro maro talohan'ny nahatongavan'ireo fanampiana ho azy ireo. Sary avy amin'i Antonio Tinio.
Napetraka tamin'ireo tanàna maro nidonan'ilay rivomahery ny fepetra tsy fahafaha-mivezivezy amin'ny alina mba hitandroana ny filaminana sy ny fanarahan-dalàna, indrindra mba hanakànana ny asa fandrobàna mihanaka be. Sary avy amin'i Antonio Tinio.
Afaka roa na telo volana no ho tafaverina ny herinaratra. Mandritra izay, miasa amin'ireo mila manamaina ny lamba fitafiny ireo tariby nitondra herinaratra. Sary avy amin'i Antonio Tinio.
An'arivony tamin'ireo sisam-patin'ny rivomahery no nandao an'i Samar sy Leyte. Betsaka no nandeha nifindra-monina any Manila na tanàn-dehibe hafa toa an'i Davao. Nohazavain'i Profesora Mae Fe Templa ny fomba fitarafana ny fahaverezan'ny fitokiana amin'ny governemanta amin'ireny fifindra-monina ireny :
Milaza ny fitomboan'ny olan'ireo olona tsy manam-pitokisana amin'ny governemanta intsony ny fifindrà-monin'ireo sisam-paty.
Ny hetsik'ireo sisam-paty tamin'i Yolanda avy ao Leyte mankany an-toeran-kafa dia midika zavatra roa: ny iray dia ny tsy fihetsehan'ny governemanta ka tsy matoky ny governemanta ny vahoaka. Faharoa dia ny fandraisan'andraikitry ny vahoaka hanova ny fiainany manokana sy hamaritra ny fomba fiaina rehefa sendra ny antambo sy fahantràna lalina ary fiovaovan'ny toetrandro
Sambo tafakatra eny an-tsisin'ny arabe Anibong ao Tacloban City. Sary avy amin'i Tudla.
Maro ireo mpamboly no rava fananana/very fitaovana tao Marabut, Samar. Sary avy amin'i Tudla.
Trano iray simba tao Hernani, Samar Atsinanana. Sary avy amin'i April Val Montes.
Milina iray fanoratana isan'ireo zavatra avotra tao Balangkaya, Samar Atsinanana. Sary avy amin'i April Val Montes.
Marika famantarana fasana tao Palo, Leyte. Sary avy amin'i Pher Pasion.